Sanitary pads - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ပြိုမတေို့ လစဉျကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ဓမ်မတာစကျဝနျးအတှကျ အမြိုးသမီးလစဉျသုံးပစ်စညျး(pad)၊ဂှမျးတောငျ့ (tampon)၊နဲ့ ခှကျ (cup) ဆိုပွီး ရှေးခယျြစရာမြားစှာထဲကမှ လတျတလော အသုံးအမြားဆုံးကတော့ အမြိုးသမီးလစဉျသုံးပစ်စညျး(pad) ပွဲဖဈပါလိမျ့မယျ။
ဒါကွောငျ့ ဓမ်မတာရာသီလာနစေဉျအခြိနျအတှငျး pad လေးတှကေို စနဈတကြ ဘယျလိုသုံးမလဲ ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
1) မိမိနဲ့သငျ့တျောတဲ့ အရှယျအစားSize ကိုရှေးခယျြပါ။
မိမိရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအရှယျအစား၊ဝတျလရှေိ့တဲ့အတှငျးခံ size ပျေါမူတညျပွီး pad အရှညျအတို၊ရှယျအစားကိုရှေးခယျြပါ။ pad တှရေဲ့အိတျပျေါမှာပါလရှေိ့တဲ့အရှယျအစားဇယားကိုကွညျ့ ပွီး ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။
ရာသီသှေးပုံမှနျပမာဏပဲဆငျးလရှေိ့လား?မြားစှာ ဒလဟော ဆငျးလရှေိ့သူလား? ရာသီသှေးမြားစှာဆငျးလရှေိ့သူဆိုပါက အနညျးငယျထူပွီး စုပျယူမှုအးကောငျးတဲ့ pad ကိုရှေးခယျြပါ။
ရာသီသှေးပမာဏနညျးပါက ပိုပါးတဲ့ pad မြိုးသုံးနိုငျပါတယျ။ အခြို့ အမြိုးသမီးမြား အဖွူဆငျးနတေဲ့အခြိနျမြိုးမှာလညျး ခပျပါးပါး pad မြိုး သုံးနိုငျပါတယျ။
(ရာသီသှေးမြားသူမြား pad နှဈခုဆငျ့သုံးတာမြိုးကိုရှောငျကွဉျပါ။လဝေငျလထှေကျလြော့ကစြပွေီး ကနျြးမာရေးနဲ့မကိုကျညီတာကွောငျ့ pad နှဈခုဆငျ့သုံးမယျ့အစား ထူပွီး စုပျယူမှုအားကောငျးတဲ့ pad ကိုပဲရှေးခယျြသုံးပါ။)
3) ၄နာရီ – ၈နာရီခွားတဈခါလဲပေးပါ။
၄နာရီခွားတဈခါလဲပေးခွငျးက ရောဂါပိုးပေါကျပှားမှုနဲ့ ရာသီသှေးစိမျ့ခွငျး၊လြှံကပြေါကျထှကျခွငျးကို ကာကှယျပေးပါတယျ။ ၄နာရီခွားတဈကွိမျမလဲနိုငျလြှငျတောငျ pad တဈခုကို ၈နာရီထကျပိုအသုံးမပွုပါနှငျ့။
အတောငျပံပါတဲ့ pad လေးတှဟော ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ သငျ့ pad ကိုနရောမရှစေ့ဖေို့နဲ့ သငျ့အတှငျးခံအနားသားတှေ မစှနျးထငျးစဖေို့ ကူညီပေးပါတယျ။
(သငျ့အသားအရညျဟာ sensitive ဖွဈတတျသူဆိုရငျတော့ အတောငျပံပါတဲ့ pad တှကွေောငျ့ ပေါငျကွားတှေ နီရဲယားယံခွငျးမြိုး ဖွဈတတျလို့ အတောငျပံမပါတဲ့ pad မြိုးက ပိုသငျ့လြျောပါတယျ။)
5)အမှေးနံ့ပါတဲ့ pad တှေ
ရာသီစကျဝနျးအခြိနျမှာ ခြှေးနံ့၊ရာသီသှေးနံ့တှထှေကျမှာ စိုးကွောကျမိတယျဆိုရငျတော့ဖွငျ့ အမှေးနံ့အမြိုးမြိုးနဲ့ pad အမြိုးအစားမြားစှာရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ (Sensitive ဖွဈတတျတဲ့ အသားအရပေိုငျရှငျမြားအနနေဲ့တော့ အမှေးနံမပါတာမြိုးကိုပဲ သုံးစှဲဖို့အကွံပွုခငျြပါတယျ။)
* နောကျဆုံးအနနေဲ့ အရေးကွီးတဲ့အခကျြတဈခကျြကတော့ ရာသီစကျဝနျးကာလအတှငျး pad အခြိနျမှနျလဲသလို မိနျးမကိုယျနဲ့တဈဝိုကျကိုလညျး အခြိနျမှနျသနျ့ရှငျးစငျကွယျစှယျ ဆေးကွောသနျ့စငျဖို့ပဲဖဈပါတယျ ပြိုမတေို့ရေ *
ပျိုမေတို့ လစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဓမ္မတာစက်ဝန်းအတွက် အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်း(pad)၊ဂွမ်းတောင့် (tampon)၊နဲ့ ခွက် (cup) ဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာများစွာထဲကမှ လတ်တလော အသုံးအများဆုံးကတော့ အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်း(pad) ပြဲဖစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ဓမ္မတာရာသီလာနေစဉ်အချိန်အတွင်း pad လေးတွေကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုသုံးမလဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
1) မိမိနဲ့သင့်တော်တဲ့ အရွယ်အစားSize ကိုရွေးချယ်ပါ။
မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား၊ဝတ်လေ့ရှိတဲ့အတွင်းခံ size ပေါ်မူတည်ပြီး pad အရှည်အတို၊ရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။ pad တွေရဲ့အိတ်ပေါ်မှာပါလေ့ရှိတဲ့အရွယ်အစားဇယားကိုကြည့် ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ရာသီသွေးပုံမှန်ပမာဏပဲဆင်းလေ့ရှိလား?များစွာ ဒလဟော ဆင်းလေ့ရှိသူလား? ရာသီသွေးများစွာဆင်းလေ့ရှိသူဆိုပါက အနည်းငယ်ထူပြီး စုပ်ယူမှုအးကောင်းတဲ့ pad ကိုရွေးချယ်ပါ။
ရာသီသွေးပမာဏနည်းပါက ပိုပါးတဲ့ pad မျိုးသုံးနိုင်ပါတယ်။ အချို့ အမျိုးသမီးများ အဖြူဆင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာလည်း ခပ်ပါးပါး pad မျိုး သုံးနိုင်ပါတယ်။
(ရာသီသွေးများသူများ pad နှစ်ခုဆင့်သုံးတာမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။လေဝင်လေထွက်လျော့ကျစေပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့မကိုက်ညီတာကြောင့် pad နှစ်ခုဆင့်သုံးမယ့်အစား ထူပြီး စုပ်ယူမှုအားကောင်းတဲ့ pad ကိုပဲရွေးချယ်သုံးပါ။)
3) ၄နာရီ - ၈နာရီခြားတစ်ခါလဲပေးပါ။
၄နာရီခြားတစ်ခါလဲပေးခြင်းက ရောဂါပိုးပေါက်ပွားမှုနဲ့ ရာသီသွေးစိမ့်ခြင်း၊လျှံကျပေါက်ထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၄နာရီခြားတစ်ကြိမ်မလဲနိုင်လျှင်တောင် pad တစ်ခုကို ၈နာရီထက်ပိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
အတောင်ပံပါတဲ့ pad လေးတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သင့် pad ကိုနေရာမရွေ့စေဖို့နဲ့ သင့်အတွင်းခံအနားသားတွေ မစွန်းထင်းစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
(သင့်အသားအရည်ဟာ sensitive ဖြစ်တတ်သူဆိုရင်တော့ အတောင်ပံပါတဲ့ pad တွေကြောင့် ပေါင်ကြားတွေ နီရဲယားယံခြင်းမျိုး ဖြစ်တတ်လို့ အတောင်ပံမပါတဲ့ pad မျိုးက ပိုသင့်လျော်ပါတယ်။)
5)အမွှေးနံ့ပါတဲ့ pad တွေ
ရာသီစက်ဝန်းအချိန်မှာ ချွေးနံ့၊ရာသီသွေးနံ့တွေထွက်မှာ စိုးကြောက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် အမွှေးနံ့အမျိုးမျိုးနဲ့ pad အမျိုးအစားများစွာရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ (Sensitive ဖြစ်တတ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်များအနေနဲ့တော့ အမွှေးနံမပါတာမျိုးကိုပဲ သုံးစွဲဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။)
* နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ ရာသီစက်ဝန်းကာလအတွင်း pad အချိန်မှန်လဲသလို မိန်းမကိုယ်နဲ့တစ်ဝိုက်ကိုလည်း အချိန်မှန်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွယ် ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့ပဲဖစ်ပါတယ် ပျိုမေတို့ရေ *